QISO DHAB AH: Wuxuu u sheegayey inuu ”jecel yahay” balse ujeedkiisu wuxuu ahaa inuu hal mar la jiifto | Hadalsame Media
Home Madadaalada QISO DHAB AH: Wuxuu u sheegayey inuu ”jecel yahay” balse ujeedkiisu wuxuu...
QISO DHAB AH: Wuxuu u sheegayey inuu ”jecel yahay” balse ujeedkiisu wuxuu ahaa inuu hal mar la jiifto
(Hadalsame) 20 Juun 2022 – Wiil Howlwadaag deggan ayaa jaceyl ku abuuray gabar Madiino deggan oo uu qadka ka bartay. Markii hore wuxuu rabay in uu qootoqooto ka ga dhammaysto, balse waa u mari weysay.
Waxay ku xujeysay in uu reerkeeda ka soo doonto. Maalintii dambe wuxuu hore u watay laba Oday oo muqayiliin ah oo uu maalinkaas bacdooda qaadka ah u qaaday.
Gabadha aabbaheed markii ay u tageen waxay u sheegeen in ay wiilka wakiil ka yihiin oo ay gabadha u doonayaan. Waxay ku ballameen in ay soo diyaargaroobaan oo uu aabbuhuna u ballamin doono odayaasha qaraabada oo dhan.
Maalmihii xigay gabadhii waxay aamintay in uu wiilku daacad yahay. Maalin uu soo wacay ayuu u sheegay in guri fillo ah oo uu arooska u diyaariyay uu lacag ka sii shubay si aanan dad kale looga ijaarin. Wuxuu gabadhii ku ballamiyay suuqa Bakaaraha qeybta Cirtoogtaha ee alaabaha arooska lagu iibiyo.
Carwo inta geeyay ayuu yiri alaabtii ku cajabgelisa la soo bax. Intii ay gabadhii alaabta fiirfiirinaysay ayuu hoos kala heshiiyay qoladii carwada. Wuxuu u sheegay in lacagta uu u dhiibi doono ay 10 doollar oo qadadooda ah ka jartaan oo ay inta kale u soo celiyaan. Markii gabadhii ay alaabtii xulatay ayuu boqol doollar oo carbuun ah nimankii u dhiibay. Gabadhii waxay rumeysatay in wax walba ay daacad ka yihiin ninka.
Waqtigii salaadda duhurka ayaa la joogay xilligaas. Wuxuu gabadhii ku qanciyay in guri ay walaashiis deggan tahay oo Cirtoogtaha u dhow ay salaadda ku sii tukadaan. Markii ay gurigii tageen ma jirin cid kale oo deggan. Halkaas ayuu gabadhii uga samaystay wixii uu rabay. Aad ayay u ooysay oo u murugootay, balse wuxuu ku qanciyay in uu ninkeedii yahay oo uu isaga uun aroosi doono oo odayaashii reerkiisa uu soo diri doono.
Taas wuxuu ka ga cararayay in gabadhu ay bannaanka ku la dhegto oo uu ku ceeboobo dadka waddada maraya. Sidii ayay ku kala tageen. Wixii maalinkaas ka dambeeyay ninkii taleefankiisii kama qabanayo gabadha, gabadhiina qof ay arrinta la wadaagtay ma jirto oo waxay ka cabsaneysaa in ay bulshada dhexdooda ku ceeboowdo.
Gabdhaha waa in ay ka taxaddaraan qatarta noocaan ah.
FG: Sheekadaan waxaa ii sheegay qof igu kalsoon oo aan magaciisa/magaceeda qariyay
W; D: Cabdirisaaq Xasan Jidhi
Previous articleUkraine oo duqaysay xarun muhim ah oo uu Ruushku horay iyaga uga dhacay (Dad la la’yahay)
Next article”Ciddii doonaysa haka soo iibsato!” – Midowga Yurub oo mar qura qaadday cunaqabatayn ay horay Ruushka u saartay